Kala Qaybinta Macaamiisha ayaa Fure u ah Kobaca Ganacsiga 2016 | Martech Zone
Sanadka 2016, kala soocida caqliga leh ayaa door hoggaamineed ka qaadan doonta qorshooyinka suuqleyda. Waxay u baahan yihiin inay ka dhex ogaadaan dhagaystayaashooda macaamiisha iyo rajooyinka kuwa ugu firfircoon uguna saamaynta badan. Ku hubaysan macluumaadkan, waxay u gudbin karaan farriimo bartilmaameed leh oo laxiriira kooxdan taasoo kobcin doonta iibka, haynta, iyo daacadnimada guud.
Hal qalab tikniyoolajiyadeed oo hadda loo heli karo kala-goyn aragti leh ayaa ah muuqaalka Qaybaha Dhageysiga SumAll, Bixiye xog ku xiran Analytics. Adeegani wuxuu adeegsadaa xog laga soo ururiyay in ka badan 500,000 shirkadood iyo in ka badan hal bilyan oo macaamiil ah. Diiwaankan ballaaran wuxuu ka kooban yahay xogta dadka iyo sidoo kale saameynta uu ku leeyahay baraha bulshada qofka. Shirkad ayaa u soo gudbin karta keydkooda xiriirka emailkooda qeybta dhageystayaasha waxayna heli kartaa jinsiga, goobta, da'da, iyo xogta warbaahinta bulshada.
Ku hubaysan macluumaadkan, suuqleyyaashu waxay ku abuuri karaan ololeyaal bartilmaameed iyaga oo adeegsanaya dhowr wadiiqadood oo kala duwan, sida shabakadaha bulshada, boggaga xayeysiinta, emaylka, iyo dhiirrigelinta miisaska caawinta gaarka ah. Kala soociddu waxay u oggolaaneysaa abuuritaanka waxyaabo aad ugu habboon nolosha dhabta ah ee macaamiisha. E-mayl ku dhiirrigeliya qofka qaata inuu “nagu soo raaco barta Instagram” ayaa macno badan samaynaysa markii la xaqiijiyo inay iyagu, ugu yaraan, leeyihiin koonto Instagram ah. Tallaabada "lasocota" kadib waxay ubaahantahay guji ama labo, halkii aad kaheli laheyd geedi socodka diiwaangelinta oo dhan.
Waa tan shaxanka Qeybta Dhageystayaasha Dhammaan habka iyo sida suuqleydu uga faa'iideysan karaan fikradaha ka dhasha:
Shirkad ayaa soo dejiso liistada emaylkeeda
Mashiinka SumAll wuxuu helaa macaamiisha macaamiisha ah ee Facebook, Twitter, iyo Instagram
Heerarka kaqeybgalka iyo saameynta shabakad kasta waa la falanqeynayaa. Ka qayb qaadashadu waa sida had iyo jeer isticmaaluhu ula falgalo bartaas bulshada, saameyntuna waa tirada dadka raacsan.
Tirada dadka waxaa lagu jiidayaa iyadoo la tixraacayo cinwaanka iimaylka oo wata xog ururin ballaaran
Qalabka ayaa sidoo kale leh qayb horumarsan oo loogu talagalay dadka isticmaala Twitter kaas oo u oggolaanaya suuqleyda inay geliyaan liistada Twitter-ka ka dibna soo jiidaan emaylka iyo macluumaadka dadka. Suuqyayaashu waxay ku bixin karaan ilo si ay u dhisaan Twitter ka dib markay kalsooni ku qabaan inay ugu dambeyntii ka faa'iideysan karaan kuwa raacsan iyada oo loo marayo isgaarsiin fara badan.
Waa fursadan iskuxidhaa badan ee faaiidada u ah faa iidada ugu weyn ee qaybintaas Macaamiilku waxay filayaan khibrad isdaba-joog ah oo soo jiidasho leh, ha ahaato inay la macaamil ku sameysanayaan astaan ​​barta Instagram ama miiska caawinta wada hadalka. Qalab sida Dhageysiga Dhageystaha ayaa awood leh maxaa yeelay waxay ku hagi kartaa suuqleyda heerka hawlgalka uu isticmaalehu ku yeelan karo kanaalka bulshada. Tixgeli laba shaqsi, oo labadaba leh xisaabaadka 'Instagram', laakiin mid ayaa leh toddobo taageerayaal, midka kalena wuxuu leeyahay 42.4 kun oo raacsan. Haddii labadan leysku geeyo ololaha “Instagram”, natiijooyin baa soo bixi doona, laakiin looma qorsheynin. Macaamiisha ama rajooyinka leh raad raac weyn waxay dammaanad qaadayaan ololeyaal habaysan iyo dalabyo dhiirrigelin ah madaama qiimaha ay ku leeyihiin kanaalkaasi uu aad u ballaaran yahay
Macluumaadka qaybaha bulshada ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu ogeysiiyo khadaka caawinta, CRM, iyo aaladaha kale ee otomatiga suuq geynta ku saabsan macaamiisha qiimaha leh. Tusaale ahaan, sheekeysiga miiska caawinta iyo nidaamka taleefanka ayaa ku calaamadeyn kara isticmaaleyaasha in ka badan 100,000 taageerayaal Twitter ah, iyadoo la siinayo tilmaamaha wakiilka inuu u soo bandhigo heshiis ku saleysan Twitter ama dallacsiin gaar ah. Habkaani waa mid si gaar ah loo bartilmaameedsaday, waxayna sidoo kale buuxineysaa baahida loo qabo macaamiil badan in loo arko shaqsiyaad, gaar ahaan haddii suuqleydu ay dalabyadan oo kale u soo bandhigaan qaabab aan kala go ’lahayn oo aan loo baahnayn.
Qeybinta noocan oo kale ah oo ay ku jiraan da'da iyo macluumaadka tirada dadka ayaa sidoo kale sameysa riwaayado AdWords ah oo xoog leh, maaddaama suuqleyda ay la jaan qaadi karaan xayeysiisyadooda la soo bandhigay noocyada macaamiisha qaarkood. Tani waxay siisaa iyaga waddo ay ku dalban karaan ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah, laakiin kaliya dhagaystayaasha la bartilmaameedsaday si kharashka uusan uga bixin koontaroolka.
Qeybinta ayaa ka sii kordheysa wax ka yar tirada dadka (20-35 sano jir Massachusetts), oo loo rogo boqortooyo cusub oo ay ku jiraan dabeecadaha shabakadaha bulshada iyo ficilada kale ee siiya suuqleyda aragti dheeri ah oo ku habboon macaamiishooda.
Ku Bilaw SumAll Bilaash!
Tags: CRMFacebookhelpdeskqaybintafalanqaynta bulshadawadar ahaanTwitter
Dane Atkinson wuxuu bilaabay shirkadiisii ​​ugu horaysay, SenseNet Inc., markuu jiray 18 sano. Shirkadu waxay ku kortay si qarxis ah iyadoo u adeegaysa shirkadaha Fortune 500 (WPP, Pfizer, Lucent) boqolaal shaqaale ah oo ka kala socday saddex qaaradood. Tan iyo markaas, wuxuu lahaa xirfad aad u guuleysatay oo ah fulinta teknolojiyada wuxuuna aasaasay, iibsaday, oo iibiyay in ka badan toban shirkadood. Tikniyoolajiyaddiisa ballaadhan iyo khibradiisa suuqgeynta ayaa naga caawinaysa inaan u fidino adeegyo hodan ku ah macaamiisheenna. Marka laga soo tago jagadiisa agaasime guud, Dane wuxuu kaloo u shaqeeyaa lataliye iyo xubin guddiga dhowr shirkadood oo tiknoolajiyad hoggaamineed.
3-da cabbir ee Istaraatijiyada Suuq-geynta Emailka ee Isku-dheellitiran
Jan 24, 2016 saacadu markay ahayd 2:19 PM
Dane, ma jirtaa wax u dhigma B2B oo adeeggan ah?